5 Google Analytics Dashibhodhi Isingazokutyisidzire | Martech Zone
Google Analytics inogona kutyisidzira vazhinji vevashambadzi. Parizvino isu tese tinoziva kukosha kwesarudzo dzinofambiswa nedata kune edu madhipatimendi ekutengesa, asi vazhinji vedu hatizive kwekutangira. Google Analytics chishandiso cheimba yeanotya-ane pfungwa mushambadzi, asi inogona kuve inotaurika kupfuura vazhinji vedu tinoziva.
Kana uchitanga paGoogle Analytics, chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuburitsa yako analytics muzvikamu zvakakura zvekuruma. Gadzira madhibhodhi zvichienderana nechinangwa chekushambadzira, chikamu, kana chinzvimbo. Intra-departmental kubatirana yakakosha, asi iwe haudi kumonyanisa ako Google Analytics madhibhodhi nekupfura chati yega yaunoda mune rimwe dashboard.
Kuti unyatsogadzira dashibhodhi yeGoogle Analytics, unofanirwa:
Funga nezvevateereri vako - Iri dashboard rekuzivisa zvemukati, mukuru wako kana mutengi wako? Iwe ungangoda kuona metric iwe yauri kuteedzera pane yakawandisa granular nhanho kupfuura yako boss, semuenzaniso.
Dzivisa kuwanda - Zviponese iwe nemusoro wekuyedza kutsvaga iyo chaiyo chati kana iwe uchiida nekuronga ako madhibhodhi zvakakwana. Matanhatu matanhatu kusvika mapfumbamwe pane rimwe nerimwe dashboard rakanakira
Gadzira madhibhodhi nenyaya -Nzira huru yekudzivirira kusanganisa ndeyekuisa mumabhendi ako nemusoro wenyaya, chinangwa kana chinzvimbo. Semuenzaniso, unogona kunge uchiongorora zvese SEO uye SEM kuyedza, asi iwe ungangoda kuda kuchengeta machati ezvese zvaunoita mune rakasiyana dashboard kudzivirira kuvhiringidzika. Pfungwa yekufungidzira kwedata ndeyekuti iwe unoda kudzora kushushikana kwepfungwa, saka mafambiro uye nzwisiso zvinobuda kwatiri. Kugovera machati mumadhibhodhi nenyaya dzinotsigira izvo zvinangwa
Iye zvino zvawava nemimwe mirayiridzo mupfungwa, heano mamwe ekushandisa anoshanda kune yega yega Google Analytics dhibhodhi (Cherekedza: Ese madhibhodhi mafirimu ari eGoogle Analytics data mukati DataHero):
AdWords Dashibhodhi - Yeye PPC Marketer
Chinangwa chedashboard iri ndechekukupa muongororwo wekuti mushandirapamwe wega wega kana boka rekushambadzira riri kuita sei, pamwe nekutarisisa mashandisiro ese emari uye nekuona mikana yekugadzirisa. Iwe zvakare unowana iyo yakawedzera perk yekusafanirwa kupururudza kuburikidza neako AdWords tafura isingagumi. Iyo granularity yeiyi dashboard zvinoenderana nezvinangwa zvako uye maKPI ehe saizvozvo, asi mamwe ekutanga metric ekufunga ndeaya:
Mutengo paKuwana (CPA) uye shandisa kupfuura nguva
Shanduko nemubvunzo wekutsvaga
Yakaderera Mutengo paKuwana (CPA)
Zvemukati Dashibhodhi - ZveMukati Meter
Blogs azova iwo musana wevakawanda vedu SEO kuedza sevashambadziri. Kazhinji inoshandiswa sekuenda-kutungamira gen muchina, mablog anogona zvakare kuve kusangana kwako kwekutanga nevazhinji vako vatengi uye anoshandiswa zvakanyanya kuzivikanwa kwechiratidzo. Chero chipi chinangwa chako, ita shuwa kuti unogadzira yako dashboard uine icho chinangwa mupfungwa nekuyera zvemukati zvekuita, zvinotungamira zvakagadzirwa uye yakazara saiti traffic.
Nguva pane saiti (yakaputsika neblog blog)
Zvirongwa ne blog blog ye blog post
Saina kumusoro ne blog post / chikamu cheblog blog
Webinar vanyoresa (kana zvimwe zvinangwa zvemukati)
Zvikamu nesosi / post
Bounce mwero nesosi / post
Saiti Shanduko Dashibhodhi - Yeiyo Yekukura Hacker
Iyo peji rembwa uye kumhara mapeji angangodaro akagadzirirwa kushandura - chero chako chinotsanangurwa nesangano shanduko kuva. Iwe unofanirwa kuve A / B uchiongorora aya mapeji, saka unofanirwa kunyatso tarisa kuti iwo mapeji ekumhara ari kuita zvinoenderana neaya mabvunzo. Kune wekukura-kubira-kufunga mushambadzi, shanduko dzakakosha. Tarisa pane zvinhu senge zvinonyanya kushandura masosi, chiyero chekushandura nepeji, kana bounce mwero nepeji / sosi.
Zvirongwa nekumhara peji / sosi
Chinangwa kupedzisa nekumhara peji / sosi
Shanduko yekutendeuka nekumhara peji / sosi
Bounce mwero nekumhara peji / sosi
Ive neshuwa yekunyatso kuteedzera chero eA / B bvunzo nezuva. Nenzira iyoyo, iwe unonyatsoziva chiri kukonzera shanduko mukutendeuka kwemitengo.
Saiti Metric Dashibhodhi - Yeiyo Geeky Marketer
Aya mametric akanaka zvehunyanzvi asi anogona kuita musiyano mukuru maererano nekugadzirisa yako saiti. Kuchera zvakadzama, tarisa kuti aya matekiniki metric anobatana sei nezviri mukati kana zvemagariro metric. Semuenzaniso, vese vako vashandisi veTwitter vanouya kuburikidza nharembozha kune imwe nzvimbo yekumhara peji? Kana zvirizvo, saka ita shuwa kuti peji yekumisikidza yakagadziriswa nhare.
Nguva yakashandiswa pane saiti kwese
Yakakwira Chikamu KPIs - Yeiyo VP Yekutengesa
Pfungwa yeiyi dashboard ndeyekuti kuitisa ziso pametriki kuve nyore. Nekuda kweizvozvo, haufanire kutaurirana nevanhu vashanu vakasiyana mukati medhipatimendi rako kuti uwane maonero ehutano hwekushambadzira kwako. Kuchengeta iyi data yese munzvimbo imwechete kunovimbisa kuti chero shanduko pane yekushambadzira kuita haizozoonekwa.
Inotungamira nesosi / mushandirapamwe
Email kushambadzira kuita
Hutano hweyese faneli
Kuti titaure nezvekukosha kwekushambadzira kune rese sangano, isu tese tiri kuramba tichiwedzera kuvimba nedata. Isu tinofanirwa kuve nehunyanzvi zvakakwana kuti titore iyo chaiyo data, tivhure makiyi makuru uye titaurirane navo kumashure kumasangano edu. Ndosaka iwe usingakwanise kushaya hanya nematurusi akakosha seGoogle Analytics, kunyanya kana iwe uchidambura icho kuita chinyanyo kurumwa, semadhibhodhi.
Tags: kushambadza kupedza nezuvaanalytics dashboardsbounce ratebounce mwero nesosizvemukati analyticszvemukati metrickutendeuka analyticsmetrics ekushanduramwero wekushandurwakutendeuka nemushandirapamweshanduko nemubvunzo wekutsvagacpadata gambadataherodatahero dashboardskupedzisa chinangwagoogle analyticskpikumhara peji analyticskumhara peji dhibhodhikumhara peji metricyakaderera cpakushambadzira kpinhare yekushandisauchishandisa maitiroresolution yescreenmuzvirongwazvikamu nekutumirazvikamu nesosinguva panzvimbozvikamu zvevashandisiwebinar vanyoresa
Ongorora Kuedzwa uye Kugadziridzwa kweYako Mobile App neApplause